Halkan ka daawo khudbadda Bush
Halkan ka dhegeyso khudbadaa Bush
Ciidamada Shaati-Gaduud iyo kuwa Aadan Madoobe la kala dajiyay Yool guduud iyo Daynuunaay..;
Baydhabo: Wararka ka imaanaya xarunta gobolka Baay ee Baydhabo ayaa sheegaya in dadaaal ay baryahaaanba wadeen odayaasha, ganacsatada iyo wax garadka beelah Digil iyo Mirifle ay ku guulaysteen inay nabad ka aslaaxiyaan dhinacyada isku haya gacan ku haynta gobolada Bay iyo Bokool oo ah Xasan Maxamed Nuur (Shaati Guduud) iyo labadiiisa ku xigeen ee xagga RRA-da Shiikh Aaden Madoobe iyo Maxamed Ibraahim Xaabsade.
Ciidamada taageera Shiikh Aadan Madoobe ayaa maanta la dajiyay halka loo yaqaan Yool guduud ayadoo ciidamada taageera Shaati guduudna la dajiyay halka loo yaqaan Daynuunaay .
Xabad joojintaan iyo heshiisiinta ay odoyashu ka dhex wadaan labada dhinac ayaa haddii ay si guula ku waarto soo afjaraysa dagaalo ay ku dhinteen tiro badan oo dad ah, gaystayna waxyeelo dhaawac dad iyo burbur hanti ah.
Dagaalada labada dhinac oo qarxay bilowgii June 2002 ayaa salka ku hayay loolan xaga awooda ah oo ka dhex oogmay hogaanka sare ee RRA-da bilowgii sannadkaan, mana muuqan labada dhinac mid guul muuqata ka gaaray dagaalkaan iyadoo marba mid laga cayrsanayay magaalada xaruntu u ah ee Baydhabo.
Boosaaso: Tartanka Kubbada Cagta ee Koobka Ramadan oo 5-tii bishaan ka bilowday Puntland ayaa qaybtiisa kooxaha gobolka Bari oo isku arkayay Boosaaso waxaa uu si xiiso leh uga socdaa garoonka kubbada Cagta ee Boosaso, ciyaaraha oo la ciyaaro maalin kasta ayaa saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay waxa ay natiijadii ciyaaruhu noqotay sidaan
10/11/2002 Waxaa wada Ciyaaray Naadiga Howlaha Guud iyo kan Dowlada Hoose waxaana 1 iyo waxba ku badiyay Naadiga Hawlaha guud.
11/11/2002 waxaa is helay Naadiga Iftin iyo Maaliyada, ciyaartaan waxaa 4 loo xambariyay naadiga maaliyada oo isagu aan hal goolna shabaqa kooxda Iftiin taabsiin, waxaana guushii la hoyatay Naadiga Iftiin.
Maanta waxa wada ciyaaray Naadiga Darawiishta iyo kan Dekedaha, Naadiga Dekedaha ayaa 1 iyo Eber ku diray Daraawiishta.
Guud ahaan natiijada ciyaarahaan iyo dhibacaha kooxuhu ilaa hadda kala lee yihiin waxaan idiinku soo gudbin doonaa wararkayaga dambe haddii ALLE idmo.
Waxaa soo uruuriyay